कोरोना प्रायः कोठाबाटै सर्छ भने बाहिर हिँड्दा मास्क किन लगाउने ? – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / कोरोना प्रायः कोठाबाटै सर्छ भने बाहिर हिँड्दा मास्क किन लगाउने ?
प्रायः सबैजसो कोरोना संक्रमण बन्द कोठामा फैलिने गरेको अभिलेखहरूले देखाएका छन्। यसले कोठा भित्रभन्दा बाहिर संक्रमणको सम्भावना कम भएको देखाउँछ। तै पनि कतिपय कारणहरूले बाहिर पनि खतरामुक्त भने नभएको अध्येताहरू बताउँछन् ।
‘वास्तवमा भन्ने हो भने दैनिक जीवनमा हामी जसरी बाहिरफेर निस्किरहन्छौं, त्यस्तै क्षणमा संक्रमित बन्न पुगेको कुनै केस थिएन,’ अध्ययनमा संलग्न माइक विड भन्छन्। विड बेलायतस्थित ‘क्यान्टरबरी क्राइस्ट चर्च युनिभर्सिटी’का प्राध्यापक एवं अनुसन्धाता हुन्।
‘बाहिरी वातावरणको हावामा फैलिनेबित्तिकै भाइरस सजिलै र तीव्र गतिमा मत्थर भइदिन्छ। त्यसैले कोठा भित्रभन्दा बाहिरको बसाइमा संक्रमण जोखिम एकदमै कम हुन्छ,’ उक्त अध्येता समूहले भनेको छ।
‘भाइरसको कति कणले अरूलाई संक्रमित पार्न सक्छ भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन,’ अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स राज्यस्थित हार्वड विश्वविद्यालयका जेनेटिसिस्ट एवं भाइरस विज्ञ स्टिभ एलेज भन्छन्, ‘तर जति बढी मात्रामा त्यस्ता कण भयो, त्यति नै धेरै संक्रमणको खतरा बढाउने चाहिँ पक्का छ।’
‘मानिसहरू सडकमा हिँड्दा हिँड्दै नजिकैबाट जाँदा एकबाट अर्कोमा संक्रमण सरेको अहिलेसम्म कुनै उदाहरण भेटिएको छैन,’ अध्येता टोलीले भनेको छ, ‘तर त्यसरी हिँड्दा सर्दैसर्दैन भनेर ठोकुवा गर्न अहिले सकिन्न। सम्भावना एकदमै कम हुने मात्र हो।’
हावामार्फत् हुने भाइरस संक्रमणबारेका विज्ञ लिन्से मार सकभर भीडभाडमा निस्किँदा मास्क लगाएरै हिँड्ने सल्लाह दिन्छिन्। उनी अमेरिकाको ‘भर्जिनिया पोलिटेक्निक इन्स्टिच्यूट एण्ड स्टेट युनिभर्सिटी इन ब्ल्याक्सबर्ग’ कार्यरत छिन्।
‘हामी कुनै संक्रमितको छेउबाट हिँडेका बेला उसले छाडिरहेको सासको लहरलाई हाम्रो सासले ठीक त्यतिबेलै तानिदिन पनि सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘झट्ट एकैछिनमा छेउबाट हिँड्दा त त्यति जोखिम हुन्न। तै पनि त्यसले संक्रमण सम्भावना बोक्छ।’
‘कमै खतरा भए पनि सकभर किन जोखिम लिने?,’ उनी भन्छिन्, ‘जबकि मास्क लगाउने हो भने ढुक्कै हुन्छ। मास्क लगाउँदा केही बिग्रने पनि होइन।’
‘बाहिरै भए पनि टेबुलहरू बीच दुरी हुनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘र नखाइ बसेका बेला मास्क लगाएरै बस्नु उचित हुन्छ।’
‘निरन्तर मास्क लगाउनु सबभन्दा सजिलो र सुरक्षित उपाय हो भन्ने त अब विश्वव्यापी रूपमै प्रमाणित भइसकेको छ,’ अमेरिकाको कनेक्टिकटस्थित येल विश्वविद्यालयमा महामारी विज्ञान तथा वातावरण इन्जिनियरिङका प्राध्यापक क्रिस्टल पोलिट् भन्छिन्, ‘बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै छेवैमा कसैले नखोक्ला वा हाछ्युँ नगर्ला भन्ने छैन नि!’
Previous: भारतीयलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
Next: प्रदेशसभा स्थापनाकालागि सभामुख देउखुरीमा